Adeegga OEM - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Indho-indho-indho-sameedka Xariirta ah ee Jirka suufka Madow
Xiritaannada Indhuhu Synthetic ee Xariirta ah ee Daahsoon
Indha-shareeraha synthetic ee Birlabka
3D Mink Indhaha
Waxaad u qalantaa waxa ugu fiican
Summada gaarka ah (Adeegga OEM) waa mid ka mid ah isbeddellada caanka ah ee halkan ku faafaya maanta! Iyo, yaa ugu sharxi kara? Adiga! Markaad tahay wax soo saarka ugu wanaagsan ee Ilaah, haddaba maxaad naftaada uga iibinaysaa mid kale? Waxaad u qalantaa adeegga gaarka ah Vannova waa talada ugu fiican ee abuurista indho-sharafeedka gaarka ah ee ganacsigaaga.
Indha-shareeraha summada gaarka ah (adeegga OEM)
Waa wax aan la khilaafi karin in baakadaha indhaha ee gaarka ah ay muhiim u tahay sumadda, marka haddii aad nala shaqeyso, waxaan kaa caawineynaa inaad abuurto baakadaha ugu soo jiidashada badan uguna soocan. Kooxda naqshadaynta gaarka ah ayaa kuu dammaanad qaadaya baakad jilicsan, adeegeena nakhshaduna waa lacag la'aan dalabkaaga badan. Baakaddeenu waxay ku raaxaysataa tayada sare leh sababtoo ah dhammaan naqshadahan waxay isticmaalaan faan casri ah oo tixraac ah sidoo kale waxaan leenahay xiriir dhow oo is-waafajin leh oo leh warshado badan oo baakadaha iyo warshadaha daabacaadda kuwaas oo sameeyay heerka koowaad ee gudaha ee hadda jira, qaabeynta qalabka caalamiga ah ee hogaaminta iyo awoodda wax soo saarka alaabta baakadaha sanado badan.
Summada gaarka ah ee indho-sharafeedka indho-shareereedka indhaha ee gaarka ah Waxaanu maamulnaa noocyo badan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee indhaha indhaha ee gaarka ah iyo qaababka baakadaha indhaha oo waxaad dooran kartaa wax kasta oo aad jeceshahay, Haddii aysan jirin nooc ka mid ah fadligaaga, waxaad u sheegi kartaa macluumaad gaar ah si aad u qeexdo waxa aad jeceshahay, iyo fannaaniintayada garaafyada ayaa ka bixi doona si ay u abuuraan barnaamij gaar ah oo u shaqeeya shirkaddaada. Waxaan dammaanad qaadeynaa tayada waxaanan bixinaa adeeg iib ka dib oo si wanaagsan loogu farxo dhammaan baakadaha aan iibinay. Waxaan ka caawinnay macaamiil badan inay dejiyaan astaanta guusha waxaanan u hibeyn doonaa adeeggaaga dadaalkayaga ugu badan. Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho, kooxdayadu waxay diyaar u yihiin inay kula shaqeeyaan.
Habka Summada Gaarka ah
(1) Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso amarka badan;
(2) Kadib noo sheeg nooca baakadaha aad rabto iyo fikradaha naqshadeynta aad jeceshahay, waxaan u gudbin doonaa shuruudahaaga fanaaniinta garaafyada waxaanan diyaarin doonaa naqshadeynta;
(3) Waxaan u lahaan doonaa ugu yaraan 3 qaab naqshadeeye tixraacaada. Dooro midka ugu fiican ee aad jeceshahay oo noo sheeg haddii aad u baahan tahay wax hagaajin ah;
(4) Waxaan kuu soo diri doonaa naqshada dib loo eegay si aan adiga kuu xaqiijiyo;
(5) Haddii aad ku qanacsan tahay, waxaanu samayn doonaa faylka daabacaadda ee warshadda daabacaadda ka dib jeeg saddex jeer ah. Warshada daabacadu waxay xaqiijin doontaa oo diyaarin doontaa wax soo saarka badan;
(6) Waxaan helnaa sanduuqa ugu dambeeya oo jeedalkaaga ku xidho, ka dibna kuu soo dir
Qolka 703, Dhismaha Zhongyuan, 368 Waqooyiga Youyi Street, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha.